Paikady TikTok hanamafisana ny orinasanao Amazon
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-28
"TikTok no nahatonga ahy hividy azy" (#TikTokMadeMeBuyIt) dia iray amin'ny tenifototra TikTok malaza ampiasain'ny influencers hizara ny zavatra tian'izy ireo. Ny ankamaroan'ny influencer dia niorina tamin'ny Amazon ny atiny, izay nahatonga ny #AmazonFinds. Io kosa dia manana fomba fijery mihoatra ny 1.5B. Mpampiasa maro no nividy ireo vokatra izay ...
Inona no hodinihina rehefa mampitaha ny mpamatsy
Inona no tokony hoeritreretina rehefa mampitaha ny mpamatsy rehefa mitady mpamatsy ho an'ny Amazon ianao, misy lafin-javatra maro ilainao manontany sy mampitaha an'ireo mpamatsy no dinihinao. Ireto misy ohatra vitsivitsy momba ny zavatra tokony hapetraka raha miantsena amin'ny mpamatsy iray: Fotoana fandefasana ho an'ny t ...
Mpamatsy mpikarakara vatasarara vita amin'ny volotsangana
Na mafy toy inona aza no tadiavinao dia tsy handamina ny tenany ireo vatasarihana lakozia. (Matokia ahy - Vao tsy ela akory izay no teo am-pelatanako ny raharaha taorian'ny fiandrasana an-taonany maro.) Ireo mpikarakara ireo dia tokony ho afaka manampy anao, farafaharatsiny. Tena marani-tsaina daholo izy ireo ary mihoatra ny plastika maloto izay azontsika rehetra ...
SORATRA FANAPOTANA NY HAY: INONA NO HOAFIDINA? KARAO TSARA INDRINDRA HO AN'NY SORATRA MANAPAKA
SORATRA FANAPOTANA NY HAY: INONA NO HOAFIDINA? KARAO TSARA INDRINDRA HO AN'NY SORATRA MANAPAKA Nahoana no malaza be ny takelaka fanapahana hazo? Tsotra ny valiny: maharitra kokoa izy ireo, azo antoka kokoa ho an'ny antsy, manintona kokoa ary misy lamaody, ankoatr'izay, manana fampiasana maro izy ireo! Na ny mofo voadidy aza dia afaka mijery an'io ...
FOMBA FANOMPOANA NY CADDY BAMBOO BATHTUB
FOMBA FANOMPOANA NY BADTO BATHTUB CADDY Rehefa mividy caddy fandroana amin'ny volotsangana ianao dia tokony ho fantatrao ny fomba fanadiovana sy fitazonana azy io tsara hampiasa io fitaovana miavaka io araka izay azo atao. Nefa indray andro any mety hieritreritra ianao fa afaka mamolavola ireo fantsom-bararata? Ahoana ny fomba fanadiovana fitoeram-bararata? Bobongolo, bakteria, loko hafahafa daholo ...
Ahoana ny fomba hahomby amin'ny orinasa Amazon - 2021?
Androany, mihoatra ny antsasaky ny varotra Amazon dia avy amin'ny mpivarotra antoko fahatelo. Ny fanaovana asa any Amazon dia hanana safidy famonoana hafa isafidianana. Ireo mpivarotra mivarotra amin'i Amazon dia nanalavitra ny olana logistika sasantsasany, saingy noho ny halaviran'izy ireo sy ny fahafahany mivarotra vokatra. Amidin'i Amazon ...